पोखरा एयरपोर्टको विषयलाई लिएर संसदमा खरो उत्रिए खगराज (भिडियो सहित) • Pokhara News by Ganthan
पोखरा एयरपोर्टको विषयलाई लिएर संसदमा खरो उत्रिए खगराज (भिडियो सहित)
पोखरा, २८ जेठ /नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रिय सदस्य तथा सांसद खगराज अधिकारीले सदनमा पोखरा विमानस्थल निर्माणका विषयमा खरो प्रश्न गरेका छन् । विमानस्थल निर्माणमा बाधा पु¥याउने तत्व सक्रिय भएको भन्दै त्यस्ता तत्वमाथी छानवीन गरी कारबाहीको माग गरे ।
‘२०३२ सालदेखि जग्गा अधिग्रहण गरेर १५ प्रतिशत निर्माणको काम भैसक्यो । ठेक्कापट्टाको काम पनि सकियो । अहिले सम्याउने काम लगभग टुंगिएको छ, उनले भने–पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका ’boutमा एकाएक सरकारकै बिशेषज्ञको नाममा नक्कली ढंगले अव अन्तराष्ट्रिय उडान हुन सक्दैन भन्ने अधिकार कसले दियो ? ति माथी कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ?’
विकास निर्माणमा बाधा दिने मन्त्रालयमै कर्मचारी भएको भए छानवीन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । नेपालको विकास निर्माणमा विकास विरोधी एजेण्ट घुसेको टिप्पणी गर्दै अधिकारीले त्यसमाथी तुरुन्त कारबाही गरी सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘जनताको मनमा चिसो पानी खन्याउने काम भएको छ । अन्तराष्ट्रिय हवाई उडानको झुट प्रचार गर्नेमाथी कारबाही होस्, उनले थपे–विकास विरोधी तत्वलाई थुतेर कारबाही गर्ने आँट पर्यटन मन्त्रालयसँग छ कि छैन ? म कारबाहीका लागि जोडदार माग गर्दछु ।’
एसईई परीक्षा दिएका विद्यार्थी माझ विकल्प
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका कर्मचारी आन्दोलनमा